कति सजिलो छ है, भन्नलाई ‘जे’ गरे नि भइहाल्यो नि !
साँच्चि भनेको यो जे, भन्ने शब्द ले त संसार नै खाएको छ । हामी नेपाली को बानि न पर्यो, जुनसुकै कुरा पनि ‘जे’ मा लगेर जोडिदिन्छौँ । पढ्ने देखी लिएर पढाउने अनि जागिरे देखि बेरोजगार, बच्चा देखि वृद्ध सबै ‘जे’ मा कुरा टुङ्ग्याउन खप्पिस छन् । भन्नेहरु ले, तपाईलाई ‘जे’ पनि भन्दिन सक्छन् ।
सायद तपाई कन्फ्युज हुनुहुँदै होला, के ‘जे’ पिटि कुरा गरिरा’को भनेर ! तर म साँच्चै भन्दैछु, ‘जे’ को महिमा विशाल छ । तपाईहरु दुई जना भेट हुनभयो, अनि रेष्टुरेन्ट जानु भयो भने, कुरा सुरु हुन्छ । के खाने ? अर्को को जवाफ हुन्छ, ‘जे’ खाए पनि भइहाल्छ नि ! तब तपाई सोध्न थाल्नुहुन्छ, यो हो ? त्यो हो ? यो खाने, त्यो खाने ? अघि ‘जे’ खाए पनि हुन्छ भन्ने को चित्त बुझाउन तपाईलाई साह्रै गार्हो हुन्छ । उसले यो भनेर तोकेर भन्दैन्, तपाई हरेक चिज सोध्नुहुन्छ उ अझै दोहोर्‍याइ रहन्छ, ‘जे’ खाए नि भै’गयो नि ! रेष्टुरेन्ट मात्र हैन, तपाई घर मा नि त्यही त हुन्छ नि ! भन्नेबेला ‘जे’ खाए नि हुन्छ भन्ने, पछि चाँहि यस्तो र त्यस्तो किन नपका’को भन्ने त तपाई को पुरानै आदत हो नि !
साथिहरु बिच कुरा चल्छ, त्यो काम के गर्ने ? एउटा ले हत्त न पत्त आइडिया निकाल्छ, ‘जे’ गरे नि भइहाल्यो नि ! अनि त्यही ‘जे’ को पछाडि लाग्ने हो भने, बर्षौँ बित्छ । तर उसले भनेको ‘जे’ के थियो पत्ता लगाउन सकिँदैन । उसलाई सोध्नुपर्छ, ‘जे’ भनेको के हो ? यसो गर्ने हो ? त्यसो गर्ने हो ? हामी अनेक प्रश्न को बर्षा गरेर उसको ‘जे’ पत्ता लगाउने कोशिस गर्छौँ, तर उसैलाई ‘जे’ भनेको के हो थाहा छैन त, हामीलाई उसले के उत्तर देला’ र ?
कोही यस्ता पनि हुन्छन्, ‘जे’ सोचे पनि बाल नदिने । भन्न पाएपछि ‘जे’ बाहाना नि बनाइदिने ! मलाई नि यो ‘जे’ ले नराम्रो सँग गाँजेको छ । जसले ‘जे’ सोचे पनि बालै भएन । तर यही ‘जे’ को बारेमा खोजिनिति गर्ने हो भने, सायद म सँग जवाफ छैन ।
‘जे’ कै कुरा गर्दा याद आयो ! स्कुल हुँदा Math को क्लास मा यो ‘जे’ ले साह्रै दु:ख दिन्थ्यो । त्यो x,y आदि variable राखेर, मानेर गर्नु पर्ने हिसाब मा सर भन्नु हुन्थ्यो, ‘जे’ राखे नि हुन्छ । हुन पनि हो, हामी फेरि ‘j’ लेख्दा नि हुन्छ भनेर, सर को दिमाग माथि हमला गर्थ्यौँ । सर पनि के कम, “राखन, अरे राखन, j राखन” भनेर हामीलाई ‘जे’ ले नै प्रतिवाद गर्नुहुन्थ्यो । अनि j त के लेखिन्थ्यो त्यसको सट्टा मा x, y आदि लेखिन्थ्यो, लुरुक्क परेर !
हिजो अचानक न्युरोड गेट मा पुराना मित्र फेला परे । उनी पनि यही ‘जे’ गरे नि हुन्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त बाट प्रेरित भएका रहेछन्, उनी भन्दै थिए । पैसो नै कमाउने भए, जे गरे नि भइाहाल्यो । उनको ‘जे’ ले कति सम्म थेग्छ उनी नै जानुन् तर मेरा लागि त्यो ‘जे’ को अर्थ अपार थियो । भन्दै मा ‘जे’ भनिसके पछि, त्यसको अन्त्य म बबुरो ले पत्ता लगाउने कुरै भएन । मैले हो मा हो मिलाए, जे गरे नि भै’गो नि । देशमा जसले ‘जे’ गरे पनि भा’कै छ क्यारे ! साथिभाइ ले आफू सँग ‘जे’ गरे नि हुन्छ जस्तो गरेकै छन् क्या रे ! तर खै वास्तव मै ‘जे’ भन्नु चाँहि नहुने जस्तो पनि लाग्छ कहिले काँहि ।
‘जे’ भनेपछि त सारा संसार नै डुब्छ । ‘जे’ गरे नि हुन्छ, ‘जे’ खाए नि हुन्छ, ‘जे’ बोले नि हुन्छ । बोलेको पैसो लाग्दैन क्यारे ! बिन्दास ‘जे’ बोले नि हुन्छ, नपत्याए हाम्रा नेताहरु को भाषण सुन्नुस् न, ‘जे’ बोले नि हुन्छ भन्ने कुरा कति मज्जा ले व्यवहार मा उतारेका छन् । यो ‘जे’ भन्ने एक अक्षर को प्राणी ले सायद ‘विन्दास’ को अर्थ बताउला या कुनै रोकटोक बाहेक भन्ने बुझाउला या के ? यो ‘जे’ पनि अवस्था अनुसार फरक भइदिन्छ । लौ, मैले त लेखिदँए अब तपाई ‘जे’ गर्नुस् ।
तर यो ‘जे’ खानेभन्दै मा ‘जे’ नि खानु भएन अनि गर्ने भन्दै मा ‘जे’ पनि गर्नुभएन । यहाँ त अनेक अर्थ निस्किन्छ, तपाई ले ‘जे’ भन्नुभयो भने ! बरु यो ‘जे’ भन्न छोडेर केही विषय मा केन्द्रित भएर ठ्याक्कै त्यही कुरा गरे पो रमाइलो र राम्रो हुन्थ्यो होला । तर यो जन्मै देखि लागेको बानि कहाँ छुट्छ र हजुर ! तपाइ को मनले, दिमाग ले ‘जे’ भन्छ त्यही गर्नुस् हजुर ! तर उ, त्यो भनेर कुरा चाँहि चबाउनु भएन नि ! हाम्रो अर्को अचम्म को बानि छ, केही मिलेन भने, केही भन्या जस्तो भएन भने, दोष अरु को मा थुपार्दिने । त्यसले त्यो गरेर त हो नि, हामी ले गरेको त त्यो भयो, मैले त त्यो गरेकै हो ! हा हा हा ! जसले ‘जे’ भनुन हामीलाई बालै भएन ! हाम्रो ‘जे’ जिन्दावाद !
जीवन श्रेष्ठ April 4, 2010 at 10:49 AM
अमेत्य April 4, 2010 at 11:47 AM
जय भोलि को याद दिलाउने दामी लेख लाग्यो मलाइ त !!!!
Nepaliko Aawaz April 4, 2010 at 12:12 PM
जसले ‘जे’ भनुन हामीलाई बालै भएन ! हाम्रो ‘जे’ जिन्दावाद !
अनि साच्चैं आकार ब्रो यो 'जे' चाहिं कुन पार्टीको नेता हो नि ??? हा हा हा हा
samita April 4, 2010 at 2:37 PM
hehe nice one aakar ...like it...
Dilip Acharya April 4, 2010 at 5:41 PM
ब्लग नै त हो 'जे' लेखे पनि भयो :) अनि कमेण्ट नै गर्ने त हो त्यो पनि 'जे' लेखे पनि हुन्छ ।
हा हा ....दामी ाग्यो मलाई यो जे महिमा ।
prelude April 4, 2010 at 8:58 PM
blog lekhne le j lekhne ni bhayo, comment garne le pani j nai gare pani bhaihalyo ni!jasle j lekhe ni balmatlab!hahaha...good one
Montessori April 5, 2010 at 12:11 PM
Montessori November 12, 2010 at 4:08 AM
samita November 12, 2010 at 4:08 AM
अमेत्य November 12, 2010 at 4:08 AM